အီတလီဒါဘီပွဲစဉ်မှာ ရုန်းကန်ရမယ့် လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်း
ချန်ပီယံဆုအတွက် အီတလီဒါဘီက ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက် အဟန့်အတားလား . . .
27 Apr 2018 . 5:37 PM
ချန်ပီယံဆုအတွက် အီတလီဒါဘီက ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက်
အဟန့်အတားလား . . .
အင်တာမီလန် – ဂျူဗင်တပ်စ် (တနင်္ဂနွေ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ)
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က အိမ်ကွင်း Allianz Stadium မှာ နာပိုလီအသင်းကို နောက်ကျဂိုးနဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ရတာက စီးရီးအေချန်ပီယံဆုအတွက်
ဂျုဗင်တပ်စ်တို့ကို ဖိအားဝင်သွားစေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး (၆)ကြိမ်ဆက် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီး စီးရီးအေပြိုင်ပွဲဆိုတာ ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက်
ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ နာပိုလီရဲ့ ချန်ပီယံဆာလောင်မှုက ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ဖိအားဝင်စေခဲ့တယ်။ နာပိုလီ
အသင်းက ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိတော့တဲ့ ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းနဲ့ ကန်ရမှာဖြစ်လို့ ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက် အီတလီဒါဘီက သေရေး
ရှင်ရေးလို ဖြစ်လာတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ မီလန်အသင်းတွေရဲ့ အရှိန်အဝါကျဆင်းလာခဲ့မှုကြောင့် အီတလီဒါဘီက သိပ်အသက်
မဝင်တော့ပေမယ့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ လက်အောက်မှာ အင်တာမီလန်က ခေါင်းပြန်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တယ်။
ဥရောပနဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာ အဆက်အသွယ် ပျက်နေခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အတွက် လာမယ့် ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို တစ်
ကျော့ပြန် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ ဆန်စီရိုမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို နိုင်မှကို ဖြစ်နေတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်ကလည်း သရေဆိုရင်တောင် အခြေအနေ
မကောင်းနိုင်လို့ ဒီပွဲကို နိုင်မှကို ဖြစ်နေတယ်။ အီတလီဒါဘီ တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လာတော့မယ့် အနေအထား။ အခြေအနေကိုက ချန်ပီ
ယံဆုအတွက် ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ ခက်ခဲတော့မယ့်ပုံစံ။ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး (၁၇)ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ အင်တာမီလန်က (၃)ကြိမ်သာ
အနိုင်ရပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်က (၉)ကြိမ်အထိ အနိုင်ရကာ (၅)ပွဲသရေကျထားခဲ့တယ်။ ဆန်စီရိုမှာတော့ အင်တာမီလန်ကို နောက်ဆုံး (၃)
ပွဲဆက် ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ နိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ်။ (၂)ပွဲရှုံး (၁)ပွဲသရေသာ ကစားထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ပထမအကျော့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ အိမ်
ကွင်းမှာတောင် အင်တာမီလန်ကို အနိုင်မရခဲ့ဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာမယ့် အင်တာမီလန်နဲ့ ချန်ပီယံဆုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ရဲ့ ဆန်စီရိုကွင်းအတွင်းက နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်မယ့် အီတလီဒါဘီပွဲ ဖြစ်လာမှာ
ကစားသမားအင်အားပိုင်းကို ကြည့်မယ့်ဆိုရင်လည်း ဂျူဗင်တပ်စ်သာနိုင်တာဆိုလို့ ကွင်းလယ်ပိုင်းသာရှိတယ်။ တိုက်စစ်၊ ခံစစ်နဲ့ ဂိုး
သမားနေရာတွေကတော့ အင်တာမီလန်တို့ ကောင်းကောင်းယှဉ် ကစားနိုင်တဲ့ အနေအထား။ သွင်းဂိုးနှုန်းမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ သာနေ
ပေမယ့် အင်တာ တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်လာမယ့် ပါရီဆစ် Perisic နဲ့ အီကာဒီ Icardi တို့ရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းက အဓိက နောက်ခံလူ ချီလီနီ
ဒဏ်ရာကြောင့် မကစားနိုင်ဖို့များတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်နောက်တန်းကို ကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခပေးလာနိုင်တယ်။ လက်ရှိရလဒ်ပိုင်းမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်သာနေပေမယ့် နောက်ဆုံး အိမ်ကွင်း (၄)ပွဲဆက် ပေးဂိုးမဲ့ ကစားထားနိုင်တဲ့ အင်တာနောက်တန်းက ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်ကို
အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာဖို့ရှိတယ်။ SPAL ခရိုတိုနီအသင်းတွေကိုတောင် သရေပဲကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့ နောက်ပိုင်း
အဝေးကွင်း ရလဒ်ပိုင်းတွေက စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်နေတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်က ထွက်ခဲ့ရသလို နာပိုလီအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာတွေဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လို့ ဒီပွဲကိုလည်း ရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်။ ဒီလို
အဘက်ဘက်က အကျပိုင်းကို မသိမသာရောက်လာတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့အတွက် သရေသာ အမြင့်ဆုံးရနိုင်ချေရှိတယ်။ နှစ်သင်းပေါင်း
သွင်းဂိုးများနိုင်ပြီး အနိုင်အတွက်ဆိုရင်တော့ အင်တာမီလန်ကိုသာ ရွေးချယ်ချင်တယ်။
Photo:Sumberbola, Freesupertips, FIFA 18
ခ်န္ပီယံဆုအတြက် အီတလီဒါဘီက ဂ်ူဗင္တပ္စ်အတြက်
အဟန့်အတားလား . . .
အင္တာမီလန် – ဂ်ူဗင္တပ္စ် (တနင်္ဂေနြ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ)
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က အိမ္ကြင်း Alianz Stadium မွာ နာပိုလီအသင်းကို နောက္က်ဂိုးနဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ရတာက စီးရီးအေခ်န္ပီယံဆုအတြက်
ဂ်ုဗင္တပ္စ္တို့ကို ဖိအားဝင်သြားစေခဲ့တယ်။ နောက္ဆုံး (၆)ကြိမ္ဆက် ခ်န္ပီယျံဖစ္ခဲ့ပြီး စီးရီးအေပြိုင္ပြဲဆိုတာ ဂ်ူဗင္တပ္စ်အတြက်
ပြိုင္ဘက္ကင်းတဲ့ ပြိုင္ပြဲတစ္ခု။ ဒီတစ်ကြိမ္မွာတော့ နာပိုလီရဲ့ ခ်န္ပီယံဆာလောင္မှုက ဂ်ူဗင္တပ္စ္ကို ဖိအားဝင်စေခဲ့တယ်။ နာပိုလီ
အသင်းက ဘာမွေ်္လာင့်ခ်က္မွ မရွိတော့တဲ့ ဖီအိုရင္တီးနားအသင်းနဲ့ ကန်ရမျွာဖစ္လို့ ဂ်ူဗင္တပ္စ်အတြက် အီတလီဒါဘီက သေရး
ရွင်ရေးလျိုဖစ္လာတယ်။ နောက္ပိုင်းနွစ်တြေမွာ မီလန်အသင်းတြေရဲ့ အရွိန်အဝါက်ဆင်းလာခဲ့မှုကြောင့် အီတလီဒါဘီက သိပ်အသက်
မဝင်တော့ပေမယ့် တရုတ္စီးပြားရေးလုပ်ငန်းရွင်တြေ လက်အောက္မွာ အင္တာမီလန္က ခေါင်ျးပန်ထောင္ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တယ်။
ဥရောပနဲ့ နွစ်အနည်းငယ်အကြာ အဆက်အသြယ် ပ်က်နေခဲ့တဲ့ အင္တာမီလန်အတြက် လာမယ့် ရာသီမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ်ပြိုင္ပြဲကို တစ်
ကေ်ျာ့ပန် ယွဉ်ပြိုင္ခြင့်ရဖို့ ဆန္စီရိုမွာ ဂ်ူဗင္တပ္စ္ကို နိုင္မွကျိုဖစ်နေတယ်။ ဂ်ူဗင္တပ္စ္ကလည်း သေရဆိုရင်တောင် အျေခအေန
မေကာင်းနိုင္လို့ ဒီပြဲကို နိုင္မွကျိုဖစ်နေတယ်။ အီတလီဒါဘီ တစ်ကေ်ျာ့ပန်ျပန္လာတော့မယ့် အေနအထား။ အျေခအေနကိုက ခ်န္ပီ
ယံဆုအတြက် ဂ်ူဗင္တပ္စ္တို့ ခက္ခဲတော့မယ့်ပုံစံ။ ပြိုင္ပြဲစုံ နောက္ဆုံး (၁၇)ကြိမ်တြေ့ဆုံမှုမွာတော့ အင္တာမီလန္က (၃)ကြိမ်သာ
အနိုင်ရပြီး ဂ်ူဗင္တပ္စ္က (၉)ကြိမ်အထိ အနိုင်ရကာ (၅)ပြဲသေရက်ထားခဲ့တယ်။ ဆန္စီရိုမွာတော့ အင္တာမီလန္ကို နောက္ဆုံး (၃)
ပြဲဆက် ဂ်ူဗင္တပ္စ္တို့ နိုင္ပြဲပေ်ာက္ထားတယ်။ (၂)ပြဲရှုံး (၁)ပြဲသေရသာ ကစားထားနိုင္ခဲ့တယ်။ ပထမအေက်ာ့ ဂ်ူဗင္တပ္စ္တို့ အိမ်
ကြင်းမွာတောင် အင္တာမီလန္ကို အနိုင္မရခဲ့ဘူး။ ခ်န္ပီယံလိဂ် ဝင္ခြင့်အတြက် တိုက္ပြဲဝင္လာမယ့် အင္တာမီလန္နဲ့ ခ်န္ပီယံဆုအတြက် တိုက္ပြဲဝင္လာမယ့် ဂ်ူဗင္တပ္စ္တို့ရဲ့ ဆန္စီရိုကြင်းအတြင်းက နောက္ပိုင်းနွစ်တြေမွာ အျပင်းထန္ဆုံျးဖစ္မယ့် အီတလီဒါဘီပျြဲဖစ္လာမွာ
ကစားသမားအင်အားပိုင်းကို ကြည့်မယ့်ဆိုရင္လည်း ဂ်ူဗင္တပ္စ်သာနိုင္တာဆိုလို့ ကြင်းလယ္ပိုင်းသာရွိတယ်။ တိုက္စစ်၊ ခံစစ္နဲ့ ဂိုး
သမားနေရာတြေကေတာ့ အင္တာမီလန္တို့ ကောင်းကောင်းယွဉ် ကစားနိုင္တဲ့ အေနအထား။ သြင်းဂိုးနှုန်းမွာ ဂ်ူဗင္တပ္စ္တို့ သာနေ
ပေမယ့် အင္တာ တိုက္စစ္ကို ဦးဆောင္လာမယ့် ပါရီဆစ် Perisic နဲ့ အီကာဒီ Icardi တို့ရဲ့ တိုက္စစ္ပိုင်းက အဓိက နောက္ခံလူ ခ်ီလီနီ
ဒဏ်ရာကြောင့် မကစားနိုင္ဖို့မ်ားတဲ့ ဂ်ူဗင္တပ္စ်နောက္တန်းကို ကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခေပးလာနိုင္တယ်။ လက်ရွိရလဒ္ပိုင်းမွာ ဂ်ူဗင္တပ္စ်သာနေပမယ့် နောက္ဆုံး အိမ္ကြင်း (၄)ပြဲဆက် ပေးဂိုးမဲ့ ကစားထားနိုင္တဲ့ အင္တာနောက္တန်းက ဂ်ူဗင္တပ္စ္တိုက္စစ္ကို
အေကာင်းဆုံး ထိန်းခ်ုပ္ဖို့ကြိုးစားလာဖို့ရွိတယ်။ SPAL ခရိုတိုနီအသင်းတြေကိုတောင် သေရပဲကစားနိုင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ူဗင္တပ္စ်ရဲ့ နောက္ပိုင်း
အေဝးကြင်း ရလဒ္ပိုင်းတြေက စိုးရိမ်ရေမွတ်ရောက်နေတယ်။ ခ်န္ပီယံလိဂ္က ထြက္ခဲ့ရသလို နာပိုလီအသင်းကို အိမ္ကြင်းမွာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာတြေဟာ ဂ်ူဗင္တပ္စ်အသင်းသားတြေရဲ့ စိတ္ဓာတ္ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက္မှုတျြေဖစ္လို့ ဒီပြဲကိုလည်း ရိုက္ခတ္လာနိုင္တယ်။ ဒီလို
အဘက္ဘက္က အက်ပိုင်းကို မသိမသာရောက္လာတဲ့ ဂ်ူဗင္တပ္စ္တို့အတြက် သေရသာ အျမင့်ဆုံးရနိုင်ခ်ေရွိတယ်။ နွစ်သင်းပေါင်း
သြင်းဂိုးမ်ားနိုင်ပြီး အနိုင်အတြက္ဆိုရင်တော့ အင္တာမီလန္ကိုသာ ရြေးခ်ယ္ခ်င္တယ်။